Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda UK oo banaabax balaadhan ku horqabatay 10 Downing street
Jaaliyadda UK oo banaabax balaadhan ku horqabatay 10 Downing street
Posted by ONA Admin	/ April 12, 2011
Waxaa uu mudaaharaad aad u xoogbadan ka dhacay taariikhdu markay ahayd 8b April 2011 magaalada London ee caasumadda dalka UK(ingiriiska), banaanbaxaa oo lagu hor qabtay xafiiska looga arimiyo dalka Ingriiska ee10 Downing street ee White hall.
Mudaaharaaka lagaga soo horjeedo xukuumadda dhiigyacabka Itobiya ee ka dhacay magaalada London waxaa hormuud u ahaa Jaaliyaadka UK oo ka kala socday Manchester, Birmingham, North Hampton, Leicester, Bolton, Leeds, iyo degaano kala duwan oy ku nool yihiin Somalida Ogadenia.
Waxaa kaloo kala qaybgalay Jaaliyaadka Oromada iyo Sidaaamada iyo saaxiibo ajnabai ah oo taageera halgamada Ogadenia iyo Shucuubta ay wada dhasheen ee Oromada iyo Sidaamada.
Mudaaharaadka ayaa waxay ahayd ujeedadiisu in looga soo jeediyo cambaarayn gumaysiga Itobiya iyo xadgudubka KT Meles Zenawi maamulkiisa ay ku hayaan shucuubta Somalida Ogadenia , Oromiya iyo Sidaama. Waxaa kaloo dadkii isugu soo baxay mudaaharaadka ay cambaareeyeen adeegsiga maamulka Itobiya uu adeegsado deeqda uu aduunku u fidiyo maatida oo uu u beddelo mushaahar uu siiyo maleesiyaad lagu xasuuqo shacabka loogu talogalay gargaarka.
Mudahaaraadka ayaa xilli dheer socday waxaana wacdaro ka muujiyay Haweenka Ogadenia iyo Ururka Dhallinyarada iyo ardayda Ogadenya oo ka oogay goobtaas dhaanto soo jiidatay shacab badan oo ajnabi ah iyagoo ka dib fursad u helay ay uga dhaadhiciyaan qaddiyadda Ogadenya iyo gaboodfalada xukuumadda Itobiya.
Ugu dambayn waxaa halkaas lagu diyaariyay qoraal ay saxiixeen dad aad u tiro badan oo Petition ah oo loo gudbinayo baarlaamanka iyo dowladda Ingiriiska ee UK. Banaanbaxan wuxuu ka mid yahay banaan baxyo isdahaba jog ah oo dhammaan dunida dacaladeeda ka socda oo loogu talo galay in sidii Tuunis iyo Masar karkaarka loo waydaariyo Meles, ayadoo arrintaas ay dhammaan shucuubta Itoobiya iyo kuwa Ogadenia ay ku heshiiyeen.
jaaliyadda reer ogaadeeniya ee UK guulaysta waad naga farxiseen hadaanu nahay dadka reer Ogaadeeniya ee gobanima doonka ah, gumaysiga, dhidid dhawrkiisa iyo cadawgana waad ka nixiseen.
Wax badan maysan Qaban Reer UK Waxaana yaaba sida ay ugu badanyihiin iyo wax-tar xumada ay muujiyaan Qolyaha UK. Adeer Hagar baxa haddii afarta Sawir naga daaya!
Wadani sheikh says:
Waad dadaasheen walee
Waa guul balaadhan oo u soo hooyatay Shacabka dulman ee Ogadenia, hiilka iyo Mudaharaadka walaalahooda UK ay codkooda ugu gudbiyeen aduunweynaha iyo dawlada Ingiriiska.
Viva Xaq u dirirka Ogadeenya meel walbooy joogaan.